Tag: salesforce ahịa ojii | Martech Zone
Tag: salesforce ahịa ojii
Họrọ: Ngwọta nkwado data ahịa maka Salesforce AppExchange
Wenezdee, Jenụwarị 12, 2022 Wenezdee, Jenụwarị 12, 2022 Anthony Lamot
Ọ dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ka ha guzobe njem 1: 1 na ndị ahịa na ọnụ ọgụgụ, ngwa ngwa na nke ọma. Otu n'ime usoro mgbasa ozi a na-ejikarị eme ihe maka ebumnuche a bụ Salesforce Marketing Cloud (SFMC). SFMC na-enye ohere dị iche iche ma jikọta multifunctionality ahụ na ohere na-enwetụbeghị ụdị ya maka ndị na-ere ahịa iji jikọọ na ndị ahịa n'ofe ọkwa dị iche iche nke njem ndị ahịa ha. The Marketing Cloud ga-, dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị nanị na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịkọwa data ha
Ngwaọrụ 5 iji nyere gị aka ịzụ ahịa gị n'oge ezumike
Monday, October 3, 2016 John Theis
Oge ịzụ ahịa ekeresimesi bụ otu oge kachasị mkpa maka afọ maka ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa, yana mkpọsa ahịa gị kwesịrị igosipụta mkpa ahụ. Inwe mkpọsa dị irè ga-eme ka ika gị nwee nlebara anya ọ kwesịrị n'oge oge kachasị baa uru nke afọ. N'ụwa taa, egbe egbe ga-egbutu ya ọzọ mgbe ị na-achọ iru ndị ahịa gị. Dị ga-ahazi mbọ ahịa ha iji zute mmadụ
Ozi Mgbasa Ozi 2014 si Salesforce Marketing Cloud
Tọzdee, Disemba 23, 2014 Monday, December 29, 2014 Douglas Karr
Ikekwe otu n'ime isi ihe kachasị pụta na 2014 bụ na ụlọ ọrụ na-amalite ileba anya na njem ndị ahịa. Kedu ka esi achọpụta ngwaahịa gị n'ịntanetị? Kedu ka ị si eduga atụmanya site na nchọpụta site na ntụgharị? Ọbụna nke kachasị mkpa, gịnị ka ị na-eme iji hụ na ị jigidere ma soro ndị ahịa gị nwee mmekọrịta bara uru karị? Salesforce Marketing Cloud chọpụtara na 86% nke ndị ahịa ọkwa dị elu kwenyere na inwe a